Amnesty International: Xasuuq Ayaa Ka Dhacay Gobolka Tigray-ga – Goobjoog News
Hey’adda Amnesty International ayaa qoraal ay soo saartay waxaa ay ku sheegtay in xasuuq ka socdo gobolka Tigray.
Boqolaal ayey hey’addani sheegtay in la tooreeyey ama xataa la jarjaray magaalada Mai-Kadra (May Cadera) ee dhacda gobolka Tigreyga ee koonfur galbeed dalka Itoobiya.
Dhacdada oo aheyd 9 November ayaa waxaa ay timid kadib markii ciidamada dowladda Itoobiya ay weerar ku qaadeen gobolka tigreyga.
“ Waxaan xaqiijineynaa in tiro badan lagu dilay xasuuq kuwaas oo u muuqday shaqaale nolol maalmeed ku tiirsanaa, isla markaana aan ku jirin hawlgalka dagala ee socday” sidaa waxaa yiri Deprose Muchena, oo agaasime ka ah xafiiska Amnesty International ee bariga iyo koonfurta Afrika.
Hey’addan Amnesty International ayaa sheegtay iney la hadashay marqaatiyo baad iyo saad la daba socday ciidamada Itoobiya, kuwaas oo arkay meydadka oo ku daadsan meelo badan oo magaalada ah gaar ahaa agagaarka Commercial Bank ee Ethiopia iyo jidka ah magaalada Humera.
Ugu dambentii, hey’adda Amnesty International waxaa ay qoraalka ku xustay in aan weli helin cidda ka dambeysay xasuuqa inkasta oo dad goobjoogeyaal ah ay hey’adda u sheegeen iney dilalka ka dambeeyeen Tigray People’s Liberation Front (TPLF).